Shiinaha YASKAWA MOTOMAN-GP50 warshad robot rar iyo soo dejin | Jiesheng
YASKAWA MOTOMAN-GP50 robot raritaan iyo dejin
Ku YASKAWA MOTOMAN-GP50 robot raritaan iyo dejin wuxuu leeyahay culeyska ugu badan ee 50Kg iyo ugu badnaan 2061mm. Iyada oo loo marayo shaqooyinkeeda hodanka ah iyo qaybaha asaasiga ah, waxay la kulmi kartaa baahiyaha adeegsadayaal fara badan sida qaybo badan oo ka mid ah qabashada, duubista, isku imaatinka, shiidi, iyo farsamaynta.
MOTOMAN-GP50 wuxuu qaataa qaab gacmeed godan oo leh fiilooyin la dhisay, taas oo yareyneysa xaddidaadda dhaqdhaqaaqa sababo la xiriira faragelinta fiilada, waxay baabi'ineysaa kala-goynta, waxayna aad ugu habboon tahay baridda
Ku MOTOMAN-GP50 robot rarka iyo dejinta wuxuu gaarayaa awood maamul oo aad u xoog badan iyada oo loo marayo qeybta ugu horeysa ee culeyskeeda la qaadi karo, xawaaraha, iyo xuddunta la ogol yahay ee dhidibka curcurka. Ku guuleysato xawaaraha ugu sarreeya fasalka 50Kg oo aad gacan ka geysato hagaajinta wax soo saarka macaamiisha. Adoo hagaajinaya dardargelinta iyo xakamaynta hoos u dhaca, looma baahna in lagu tiirsanaado muuqaalka, dardargelinta iyo hoos u dhaca waqtiga ayaa lagu soo gaabiyey xadka, walxaha culus iyo clamps laba laabana waa la rakibi karaa.
570Kg 4.5kVA 180 ° / seken 178 ° / seken
178 ° / seken 250 ° / seken 250 ° / seken 360 ° / seken
Tani rarka iyo dejinta robotka MOTOMAN-GP50 ku habboon yahay YRC1000 xakamaynta golaha wasiirada, taas oo ah cabir guud oo ka jira dal iyo dibad. Isticmaalka shisheeye, tarjumaanka waxaa loo isticmaali karaa danab koronto shisheeye. Iyada oo la yareynayo isbedbeddelka dhabbaha ee ay sababtay faraqa xawaaraha hawlgalka, waqtiga xaqiijinta ayaa la dhimay. Robot-ka wuxuu wax ku baraa santuuqa iyo muuqaalka waxaa lagu xaqiijin karaa qaabka aaladda 3D. Adiga oo taabanaya shaashadda, dulqabaha ayaa la dhaqaajin karaa oo la dhex wareegi karaa iyadoo loo marayo hawlgal dareen leh, oo leh firfircoonaan sare.
Hore: YASKAWA robot maarayn caqli leh MOTOMAN-GP35L
Xiga: YASKAWA MAXAAD U QAADISAY ROOBTII MOTOMAN GP165R
Robotka Gacanta otomaatiga ah, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Qabashada Gacanta Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, 6 Axis Qabashada Robot,